Sida Loogu Dhex Dheersado Suuqgeynta Mawduucaaga | Martech Zone
Waan ku riyaaqay sawirradan JBH iyo sheekada iyo sawirada ay soo saarto markaad ka fikirto waxyaabaha ku jira. 77% suuqleyda ayaa hadda adeegsada suuqgeynta waxyaabaha iyo 69% magacyadu waxay abuuraan waxyaabo ka badan intii ay sameeyeen sanad ka hor. Iyo sida qof waliba u leeyahay dhadhankiisa is biirsaday ee ay jecel yihiin, waxaa muhiim ah in la xasuusto in dhagaystayaashaadu ay kala duwan yihiin - inbadanna waxay ku raaxaystaan ​​noocyada qaar ka kooban kuwa kale.
Si lagaaga caawiyo inaad horumariso dadaalka suuqgeynta waxyaabahaaga JBH ayaa daweysay Mixology ee Macluumaadka Suuqgeynta Macluumaadka - u adeegida talobixin ku saabsan sida loo abuuro loona soo gudbiyo waxyaabaha la soo koobay iyadoo laga helayo tirooyin caafimaad leh Hubspot iyo SmartInsights oo lagu tuuray qiyaas wanaagsan!
Shakhsiyan, waxaan ku dari lahaa coaster cabitaan kasta oo fiican wac talaabo. Mawduucu sifiican ayuu ugu shaqeeyaa ganacsigaaga haddii aad siiso waddo kaqeybqaadasho iyo beddelaad ay la socoto cabitaanka!
[sanduuqa nooca = ”soo dejinta” align = ”aligncenter” class = ”” width = ””] Aqoonsiga qayb kasta oo ka mid ah waxyaabaha ay ka kooban tahay isku darka qaybaheeda waxay ahayd fikrad iyo istiraatiijiyad badan oo ka dambeysa e-bookkeenna aan ku daabacnay Meltwater, Sida loo Khariideeyo Mawduucaaga Safarrada Macaamiisha ee aan la saadaalin karin[/ sanduuqa]
Kaliya maskaxda ku hay in qofkastaaba uu qadariyo cabitaankooda waxyar oo ka duwan kan xiga. Anigu waxaan ahay taageere weyn oo ah bourbon iyo Coke fiican, laakiin xoogaa miisaan yar baan ahay, sidaa darteed caadi ahaan waxaa jira wax badan oo Coke ah marka loo eego inta badan bourbon aficionados. Ku-beddelashada isla cabbitaanka in ka badan iyo in ka badan waxay shaqaysaa oo keliya haddii ay tahay isla booqdaha aad adigu shakhsiyeynayso waayo-aragnimada in ka badan iyo in ka badan.
Sida had iyo jeer, waxaan kugula talineynaa inaad sameyso tijaabooyin si aad uhesho cabitaanka saxda ah. Waxoogaa xaqiiqooyin ah mar uun, kiis adeegsi la dhammaystiray kan xiga, iib yar oo yaraada… dhammaantood waxay noqon karaan noocyada kala duwan ee aad u baahan tahay si aad u soo jiidato xitaa dad aad u tiro badan si ay ula macaamilaan astaantaada.
Tags: BlogsContent Suuqnoocyada nuxurkainfonet suuq geyntanews warshadahainfographicjbhsaxaafad qaab dheerFoom DheerMacluumaadka Suuqgeyntaisku dhafka cilmigafiidiyowga bulshadawaxyaabaha ka kooban isticmaalemaadada fayraskawaraaqaha caddaanka ahwhitepapers